Redox 0.7 inosvika nekuvandudzwa kwekuita, rutsigiro rwakakura uye nezvimwe | Linux Addicts
Redox 0.7 inosvika nekuvandudzwa kwekuita, yakawedzera rutsigiro uye nezvimwe
Darkcrizt | 30/04/2022 16:46 | Free Software
Mushure megore nehafu yekuvandudza, kuburitswa kweiyo vhezheni itsva yeRedox 0.7 system yekushandisa yakaziviswa, vhezheni iyo iyo budiriro yakatotarisa kune chaiyo hardware uye neiyo kuvandudzwa kukuru kwave kuwanikwa, kubva pakubatana kwebhoti system, kuvandudzwa kwekuita, pakati pezvimwe zvinhu.
Kune avo vasina kujairana neRedox, vanofanirwa kuziva iyo inoshanda sisitimu inogadzirwa maererano neUnix philosophy uye inokwereta mamwe mazano kubva kuSeL4, Minix uye Plan 9.
redox inoshandisa iyo microkernel concept, umo kutaurirana kwekudyidzana uye manejimendi ezvishandiso zvinongopihwa padanho re kernel, uye zvimwe zvese zvinoshanda zvinoiswa mumaraibhurari anogona kushandiswa zvese mukernel uye mumashandisi ekushandisa.
zvose vatongi vanomhanya munzvimbo yevashandisi munzvimbo dziri kure. Kuti ienderane nemashandisirwo aripo, yakakosha POSIX layer inopihwa kubvumidza akawanda mapurogiramu kuti afambe pasina porting.
Iyo sisitimu inoshandisa iyo "zvese iURL" musimboti. Semuyenzaniso, URL "log://" inogona kushandiswa kutema matanda, "bhazi://" pakutaurirana, "tcp://" pakutaurirana netiweki, nezvimwe. Mamodule, ayo anogona kuitwa semadhiraivha, epakati ekuwedzera, uye tsika maapplication, anogona kunyoresa avo ega ma URL anobata; semuenzaniso, unogona kunyora module yeI/O woisunga ku"port_io://" URL, wozoishandisa kuwana port 60 nekuvhura "port_io://60" URL.
1 Zvinyorwa zvitsva zveRoxox 0.7
2 Dhawunirodha Redox OS
Zvinyorwa zvitsva zveRoxox 0.7
Paunenge uchigadzira vhezheni nyowani, kutarisisa kukuru kwakabhadharwa kuve nechokwadi chekushanda pane chaiyo hardware, kubvira bootloader yakanyorwazve zvachose, iyo inobatanidza boot kodhi paBIOS uye UEFI masisitimu uye inonyorwa zvakanyanya muRust. Kuchinja bootloader kwakawedzera zvakanyanya huwandu hwehutsigiro hunotsigirwa.
Muzviyo, Pamusoro pekugadzirisa zvikanganiso, basa rakaitwa kuvandudza mashandiro uye kuwedzera rutsigiro rwehardware, Kuratidzira (mepu) yendangariro dzese dzemuviri kunopihwawo, kushandiswa kwemapeji ekudzokorodza ndangariro kunomiswa, uye iyo assembler kodhi mune inline inoisa yakanyorwa patsva kuti inatsiridze kuenderana neshanduro dzemangwana dzemuunganidzi.
Iyo kodhi yekushanda neiyo ACPI AML (ACPI Machine Mutauro) yakatarwa - uefi.org yakabviswa kubva ku kernel kuenda kune acpid yekumashure maitiro ari kushanda munzvimbo yemushandisi.
Iyo faira system RedoxFS yakanyorwa patsva uye yakashandurwa kuti ishandise nzira yeCoW (Kopi-pa-Kunyora), umo shanduko hadzinyori ruzivo, asi, ivo vanoponeswa munzvimbo itsva, iyo yakaita kuti zvikwanise kuwana kuwedzera kukuru kwekuvimbika. Pakati pezvinhu zvitsva zveRedoxFS, iyo tsigiro yeshanduko yekuvandudza, data encryption uchishandisa iyo AES algorithm, pamwe nedata uye metadata chengetedzo ine masiginecha edhijitari. Kugovera kodhi yeFS muhurongwa uye bootloader inopihwa.
Kuenderera mberi nekusimudzirwa kweRelibc standard C raibhurari yakagadzirwa nepurojekiti, iyo inogona kushanda kwete paRedox chete, asiwo pakugovera kunoenderana neLinux kernel. Shanduko idzi dzakaita kuti zvive nyore kutamisa mapurogiramu akati wandei kuenda kuRedox uye kugadzirisa matambudziko nemapurogiramu mazhinji nemaraibhurari akanyorwa mumutauro weC.
A yakagadzirwa vhezheni yerustc compiler inogona kumhanya paRedox. Pakati pemamwe mabasa, iyo optimization yekuita uye kugadzirisa kwemutoro wepakeji maneja kushanda munzvimbo yeRedox inomira pachena.
Yakawedzera rutsigiro rwekutanga kune AArch64 architecture.
Yakashandurwa kugadzirisa nzira dzese dzefaira muUTF-8 encoding.
Zviri mukati meInitfs zvakaendeswa kune faira idzva, zvichiita kuti kurongedza kuve nyore.
Pakupedzisira, Kana iwe uchifarira kuziva zvakawanda nezvazvo, unogona kutarisa ruzivo mu inotevera chinongedzo.
Dhawunirodha Redox OS
Kune avo vanofarira kukwanisa kuedza Redox OS, vanofanira kuziva kuti kuisa uye mhenyu mifananidzo, 75 MB muhukuru, inopiwa. Iwo anovaka akavakirwa iyo x86_64 architecture uye anowanikwa kune masisitimu ane UEFI neBIOS.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » Redox 0.7 inosvika nekuvandudzwa kwekuita, yakawedzera rutsigiro uye nezvimwe
The Caliber zvido zvepaneru
YDB, yakavhurika sosi yakagoverwa SQL dhatabhesi